Su'aalaha caadiga ah - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Iyada oo ay si isdaba joog ah u ballaarinayso baaxadda shirkadda, AKF waxay leedahay wada-hawlgalayaal aad u tiro badan. Shirkaddu waxay siisaa taageero wada-shaqeyn dheeraad ah la-hawlgalayaasheeda, iyadoo rajeyneysa in wada-hawlgalayaasha AKF iyo saaxiibbadiis AKF ay adeeg wanaagsan u fidiyaan dadka isticmaala warshadaha.
Alaabooyinkayada nooca AKF ee qaraabada ah waxay gaareen shahaadada CEand FDA. Ku raaxeysiga mudnaanta iibinta wakiilka.
Shirkaddu waxay ku qabataa dhammaan ganacsiyada dhiirrigelinta sumcadda warbaahinta waaweyn ee shabakadda.
Ku raaxeysiga nidaamka gunnada ee dhibcaha iibinta wakiilka bil kasta. Ku raaxeysiga adeegyada iibka kadib sida soo noqoshada iyo badeecada isdhaafsiga (wixii faahfaahin ah, fadlan tixraac soo noqoshada iyo isweydaarsiga sharciyada)
Taageerada Adeegga Macaamiisha VIP:
Xarunta dhexe waxay siisaa Qiimaha, qaabdhismeedka, shaqaalaynta iyo qorista ama shuruudaha tababarka ee nidaamka taageerada adeegga macaamiisha VIP la-hawlgalayaasha iskaashiga. Xarunta dhexe ayaa mas'uul ka ah la shaqeynta shaqaalaha adeegga macaamiisha si ay si karti leh ugu shaqeeyaan alaabada iyo hawlgalka habka dabagalka isticmaalaha.
Dhammaan gobollada maareeyayaasha adeegga macaamiisha ee xarunta dhexe waa inay dabagal iyo hagitaan ku sameeyaan, bixiyaan warcelin iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka waqti kasta.
Aasaasida VIP macaamil macaamil farsamo iyo geedi socod, iyo In la hirgaliyo dhamaan hababka iyo nidaamka macaashka.
Taageerada Tababarka Badeecada Tababbarka qiimaha badeecada Tababarka Howlgalka Badeecada
Su'aalaha Badanaa Tababarada iibka iyo maamulka Tababbarka qiimaha ee kooxda ganacsiga wakiilka
Kala soocida habsami u socodka howlaha wakiilada iyo tababarada fulinta.
Tababbarka xirfadaha iibka ee wakiilada shaqaalaha. Iibinta Su'aalaha la isweydiiyo iyo jilitaanka dagaalka dhabta ah ee isgaarsiinta fudud ee xayeysiinta caqliga badan.
Sameynta koox hufan. Awoodda iyo tababbarka Maareeyaha Iibka ee aqoonta leh.
Isku-darka kooxeed iyo qaab-dhismeedka faa'iidada tartanka
Bandhig iyo Taageero Summit:
Xarunta dhexe waxay la shaqaysaa wakiilka si ay u soo diyaariso fikradda iyo geedi socodka qorshaynta oo dhan!
Wakiiladu way dalban karaan taageeradooda, xarunta ayaa diyaarin doonta shaqaale khuseeya goobta hada joogta si ay u taageeraan shaqadooda.
Ujeedada ugu weyn ee bandhiga iyo kulanka madasha shirarka ayaa ah wanaajinta sameynta calaamadda sumadda maxalliga ah ee wakiiladda iyo wakiillada goobta ku saxiixaya.
Taageerada Xayeysiinta iyo Dhiirigelinta
1.Xafiiska guud wuxuu bixiyaa taageero xayeysiin ah Suuqa Qaranka, oo ay kujiraan bandhigyo, xayaysiisyada warbaahinta, golayaasha, iwm
Marka loo eego heerka horumarinta ee suuqa gobolka, xarunta dhexe waxay siin doontaa taageero xayeysiis ah iyo abaalmarin wakiilka iyadoo loo eegayo waxqabadka iibka ee wakiilada.
3.Xaruunta waxay dejineysaa abaalmarino kaladuwan dhamaan wakiilada
4.sida ku xusan howlaha xayeysiinta ee ku saleysan howlaha
5. oo ay hayaan wakiilo qaran ama gobol ama kooxo.
6. Ku biiritaanka wakiilada iyo hawlgalka
1. Buuxinta foomka dalabka
2. Dib u eegista iyo ansixinta xarunta
3. Saxeexidda Heshiiska Wakaaladda iyo Bixinta
4. Dejinta madal wakiil.
5. Sii-deynta xuquuqda alaabooyinka AKF
6. Bixinta keydka macluumaadka iyo macluumaadka badeecada
AKF Filter Crown
Dhagta AKF oo xiran maaskaro caafimaad oo la tuuri karo Xirashada raaxada leh iyo Super ilaalinta
Xirashada Raaxo leh Aafada Degdegga ah Maaskaro Caafimaad oo La Tuuri Karo Qiiqa ka hortaga Caddaynta Boorka Ka Hortagga PM 2.5
Qofka La Xiriira Maalgashiga:
Lambarka taleefanka: 0755-82778177 Miss Yang
Cinwaanka: A-701, Yin dong dhismaha, No. 25, Shi hua Road, Futian Free Trade Zone, Shen Zhen